कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ‘डेल्टाक्रोन’ कत्तिको खतरनाक छ? – Health Post Nepal
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ‘डेल्टाक्रोन’ कत्तिको खतरनाक छ?
२०७८ चैत ३ गते १३:२९
काठमाडौं–पहिले सार्सकोभ २, त्यसपछि डेल्टा, अनि ओमिक्रोन। कोरोनाका यी तीन भेरियन्टले विश्वभर धेरै मानिसको ज्यान लिए। अब कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ‘डेल्टाक्रोन’ को त्रास सिर्जना भएको छ। यही मार्चको पहिलो साता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले डेल्टाक्रोन भाइरस फेला परेको घोषणा गर्दै यसको लक्षण र गम्भीरताबारे त्यति जानकारी नभएको बताएको थियो।
डेल्टाक्रोन भाइरस विश्वका केही मुलुकमा देखा परिसकेको बताइएको छ। डब्लुएचओले केही समयअघि डेल्टाक्रोनलाई प्रयोगशालामा निर्माण गरिएको भेरियन्ट भनेको थियो। तर यो लगातार रुपमा देखिन थालेपछि यसबारे निगरानी गर्न थालेको छ।
के हो डेल्टाक्रोन?
डेल्टाक्रोन कोभिडकै नयाँ भेरियन्ट हो, जसमा डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको केही अंश मौजुद हुन्छन्। अर्थात् डेल्टाक्रोनमा दुवै भाइरसको जिन हुन्छ। यसलाई संयोजक भाइरसको रुपमा पनि लिइन्छ।
बार्बिक विश्वविद्यालयका भाइरोलोजिस्ट प्राध्यापक लरेन्स योङका अनुसार एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी भेरियन्टबाट संक्रमित भएको छ भने यो भाइरस उत्पन्न हुन्छ।
यसैसाता वैज्ञानिकहरुको विश्व संगठन ‘जिआइएसएडी’ ले भाइरससँग सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक गर्दै यो भेरियन्टसँग सम्बन्धित पहिलो ठोस प्रमाण फ्रान्सको पाश्चर इन्सिच्युटबाट सार्वजनिक भएको जनाएको थियो। यो सन् २०२२ को सुरुदेखि नै फैलिरहेको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ। समान प्रोफाइल भएको जिनोमको पहिचान डेनमार्क र नेदरल्याण्डमा पनि गरिएको थियो।
युके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार बेलायतमा डेल्टाक्रोनका करिब ३० वटा केस देखिएका छन् भने अमेरिकामा पनि देखिएको छ। इन्सिच्युट पाश्वरका डा इटियेन साइमन लोरिरेले डेल्टा र ओमिक्रोनबाट कैयौं अलग–अलग पुनः संयोजक भाइरस बन्न सक्ने बताएका छन। उनका अनुसार फ्रान्स र डेनमार्कमा देखिएका भाइरस एकैजस्ता छन् भने एकै प्यारेन्टल भाइरसबाट उत्पन्न भएका हुन सक्छन्।
तर, बेलायत र अमेरिकामा पाइएका डेल्टा–ओमिक्रोनका केस अन्यजस्तै प्यारेन्टल भाइरसबाट उत्पन्न भएका हुन्। बेलायत र अमेरिकामा पाइएका डेल्टाक्रोन फ्रान्सको भन्दा अलग भएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ।
डेल्टाक्रोन कति खतरनाक?
विज्ञले पुनःसंयोजक भाइरस र रिकम्बिनेन्ट भेरियन्ट असामान्य नरहेको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुका अनुसार यस्तो भेरियन्टमा डेल्टाक्रोन पहिलो होइन र अन्तिम पनि।
अहिलेसम्म डेल्टाक्रोनका केही केसमात्र फेला परेका छन् भने यो कति गम्भीर र हालका खोपले यसबाट कतिसम्म रक्षा गर्छन् भन्नेबारेमा पर्याप्त अनुसन्धान भएका छैनन्।
डब्लुएचओकी प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथनले मंगलबार ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, ‘सार्सकोभ २ भेरियन्ट फैलिरहेका बेला मानव र जनावरमा रिकम्बिनेन्ट भेरियन्ट आउनसक्छ भनेर हामी सबैले भन्यौं। तर यो नयाँ भेरियन्टबारे थप जानकारीका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।
थप जानकारी र अनुसन्धान नभएका कारण यो भेरियन्टको गम्भीरताबारे अहिल्यै चिन्तित हुन आवश्यक छैन। युकेएचएसएका अनुसार यो भेरियन्ट बेलायतमा निकै कममात्रामा देखिएका छन् र विश्वका अन्य मुलुकमा कतै कतैमात्र देखिएका छन्। त्यसैले यसबारे चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तै पनि स्वास्थ्य निकायहरुले यसमाथि नजर राखिरहेका छन्।